Nagala soo xiriir – Fikirkaagu isbeddel ayuu dhalin karaa
Xarunta Dhexe ee CISP - Roma
Haddii aad bixineyso jawaab-celin, ammaan ama aad soo gudbineyso cabasho, warkaaga si weyn ayaa loo soo dhoweynayaa si taxaddar lehna waa loo tixgelin doonaa. Waan qiimeynaa jawaab-celinta aan helno maaddaama ay ina siineyso macluumaad dheeri ah ayna nagu gacan siineyso ogaanshaha meelaha ay dhibaatooyin ka jiraan si markaa tallaabo lagu saxayo loo qaadi karo.
Si aad u soo gudbiso jawaab-celin ku saabsan adeegyada iyo waxqabadyada ay bixiso CISP waxa aad:
-Buuxin kartaa foomka jawaab-celinta ee internet-ka loo adeegsado
-Buuxin kartaa foom jawaab-celin oo waraaq ku daabacan oo aad ka heli karto xafiisyadeenna gudaha ku yaalla
-La hadli kartaa shaqaalaha gudaha jooga ee CISP, oo faallooyinkaaga soo gudbinaya
CISP waxa ay dhammaan jawaab-celinta u maareysaa si sir ah oo dhex-dhexaad ah. Marka la helo jawaab-celin, waa la diiwaangeliyaa, waa la eegaa waxaana loo gudbiyaa xubin maamulka hay’adda ka tirsan oo loo magacaabey. Maamulka hay’adda ayaa dabagal ku sameynaya oo qiimeynaya in tallaabooyin ku habboon oo lagu saxayo la hirgelin karo iyo in kale, hadda ama mustaqbalka mid ay noqotaba. Tallaabooyinka dabagalka waxaa la gelinayaa xogta urursan (database), marka la soo saarayo war gaar ah, waxaa laga arki karaa qaybta Wararka Hawsha.
Haddii ay dhacdo in jawaab-celintaada aaney hoos imaan karin gargaarka CISP, waxa aan u gudbineynaa qofka ama ururka u habboon.